Ngenxa izenzakalo zamuva okukhulu eziye zenzeka e-Ukraine, kuleli zwe inani abafisa ubusakhamuzi we Russian Federation liye lenyuka kakhulu. Ukugeleza ababaleki, ngaphambili ngokuyinhloko kubantu abafuna ukuphila okungcono nemisebenzi abaholelwa kahle, manje eyayihambisana ababaleki. Indlela abasabela ngayo isimo uyashintsha, uMbuso Duma kanye Federal Migration Izikhungo?
Kuze kube manje, ukuthola yisakhamuzi Russian izakhamuzi zase-Ukraine ngokomthetho futhi inqubo izinto ngokomthetho "weMithethonqubo inqubo Ukucabangela nezindaba lobuzwe we Russian Federation" sangomhla 14.11.02. Ngokusho kwale dokhumenti, ukuthola iphasiphothi Russian isakhamuzi bezizwe ababekhulekela ufikile ensimini isiRashiya, kumele abhalise iziphathimandla zendawo afake isicelo sokubhalisa futhi uthole imvume yokuhlala. Uma sivunyiwe, umnikazi idokhumenti, kodwa ukuba isakhamuzi angaphandle ukuthola iphasiphothi ayesifuna ngabomvu kumelwe ayehlala kuyo eRussia iminyaka eyisihlanu. Le ndlela - ende futhi olusindayo.
Ikesi ekhethekile - eCrimea
ukutholwa IMisa lobuzwe Russian izakhamuzi zase-Ukraine ngemva kokuhlanganiswa, inhlonhlo ye-eCrimea ne ezwekazini yezwe. Passport bamane bashintsha, inqubo lwase lwenziwa lula kakhulu. Iningi labantu weRiphabhulikhi ezizimele ku inhlolovo baveza isifiso sabo sokuba kube abaseRussia, futhi ukuze uhambisane nemithetho esisemthethweni uvele nje engeyena kungenzeka, yebo, empeleni, kule futhi kwakungekho sidingo.
Ukuze kokufaneleka ekhethekile
Ithola yisakhamuzi Russian izakhamuzi zase-Ukraine is kakhulu lula kwezinye izimo, okuwukuthi uma ukudlula isevisi inkontileka iminyaka emithathu yempi Russian (ngokuvumelana 4 th ingxenye sihloko 13 zoMthetho Federal) noma kokufaneleka ekhethekile ngaphambi lizwe. Izimfuneko yokuhlala unomphela, ukubhaliswa kwangaphambilini imvume yokuhlala futhi yesikhashana asisebenzi lezi zimo.
Ukuxolela anikezwa labo abanikwe obaleke ezweni lakubo noma ukukhoseliswa. ingxoxo Special ukhuluma ngani izibalo nesayensi, isiko, ubuchwepheshe kanye nezinye izindima yizenzo zabantu lapho ofaka isicelo impumelelo ezikhethekile. Ikhwalifikheshini eliphakeme noma enjalo ezingavamile umsebenzi isakhamuzi kungadala isinqumo ukunciphisa isikhathi esiwunyaka 1 futhi kunjalo mathupha nguMongameli.
Uhulumeni waseRussia unesithakazelo inflow zabantu afanelekayo employable eduze ngamasiko nasengqondweni nokubunjwa eziyisisekelo bakhona. Ngemva kokuwa kweSoviet Union waba ngokoqobo inani elikhulu Russian kanye nabamele amanye abantu iziveze abaseRussia, ngokungazelelwe bazithola (ngomqondo zomthetho) angaPhandle.
Ithola yisakhamuzi Russian izakhamuzi zase-Ukraine ukuze ngohlelo lokuphulukiswa Izindawo Bakwethu ihlanganisa ukwenziwa izimo kulabo abafisa ukuba babe abantu baseRussia. Kulabo Kusolwa eziningi izinzuzo, wombuso aid nokusekelwa, kodwa kukhona ukulinganiselwa ezithile ezihambisana ne imvelo okubhekiswe isilinganiso.
Okokuqala, engu zokusebenza, ngeke sibe ngaphansi kuka-25 futhi eminyakeni engaphezu kuka-50.
Okwesibili, impesheni kanye nabantu abakhubazekile abakwazi baba amaqembu ukuze uhlelo labour kufuduka (lokho okushiwo ke).
Okwesithathu, ukuze axazulule eMoscow Petersburg, kanye nezindawo ezizungezile, Bakwethu dengwane akuzona lapha yesibonelelo sikahulumeni akusebenzi.
Inzuzo enkulu itholakala lokuthi ukuthi ukuthola yisakhamuzi Russian izakhamuzi zase-Ukraine (namanye amazwe - ayengaphansi kweSoviet) kuthiwa kakhulu yanda futhi kuthatha ngemva kwezinyanga eziyisithupha kuya onyakeni.
Ukuze iqhaza kuhlelo kufanele ahlinzeke iqoqo kwemibhalo: iphasiphothi (uma kukhona, kanye angaphandle) nge ogunyaziwe ukudluliswa, amadiploma nezitifiketi wezemfundo, irekhodi umsebenzi (uma uthanda).
Uma amamethrikhi walondoloza izihlobo, okufakazela imvelaphi Russian (okuhlanganisa neqiniso lokuzalwa ku RSFSR), khona-ke, futhi, kuyinto efiselekayo unamathisele.
Ithola yisakhamuzi Russian izakhamuzi zase-Ukraine ngendlela elula
Uma isakhamuzi Ukraine alikho yempi, futhi akudingeki ukuba bashiye amakhaya abo njengoba ababaleki, indlela elula ukuze uthole yisakhamuzi - isicelo angaphandle Russian (mission zamanxusa noma kwesigaba ezimela). Lokhu ngokushesha aqede izinkinga eziningi ezihlobene isikhathi yokuhlala non-enihlala Russian Federation. Kulokhu asikho isidingo ukuthola imvume yokuba yisakhamuzi, imfuneko ngoba sihlale yonyaka ensimini ka-Russia, futhi, akunamthelela. Eqinisweni, ngesikhathi yokucabangela (sikhatsi lesingaba tinyanga letisitfupha) Awukwazi ukushintsha indlela komkhuba ukuphila.
phezu lula iphrojekthi
Naphezu amahemuhemu eminingi ukuthi ilungelo lokuba izakhamuzi Russian Ukraine manje uthole lula, alithathe, ayethi uzokwenza ngazo, nje kwezinyanga ezimbalwa, umthetho Russian ayikashintshi kakhulu. Umthetho okusalungiswa yokuncishiswa nezinqubo ezikhona, i-Duma State uzoba cabanga, kodwa lokhu akuzange kwenzeke okwamanje. Ngo ukwethulwa idokhumenti iyadingeka ukuze uvumele ilungelo kuthutha izigaba ethile yezakhamuzi Ukrainian, ezifaka hlangana ukuhlahluba Russian abakhuluma isiRashiya ne izimpande efanayo. Lokhu kusho ukuthi abantu fated zizithole phesheya, kodwa abazalelwa Empire isiRashiya, RSFSR noma isiRashiya, noma enabazali wahlala lapha, kunezimo ezithile kunabanye abafake izicelo i-passport ne ukhozi kabili ephethwe. Ngakho ilungelo ezimbili yisakhamuzi iphrojekthi singanikezwanga.
Lowo Mbhalo wangonyaka we ayikwazi kubhekwe ngokupheleleyo ithuthukiswe, libuye libe nabaphikisi nabasekeli.
Izikhombisi-main kwengqondo: isayensi, kodwa ehlukene nodaba